Umatshini wokusika kunye nepulverizer kunye nefektri - China umsiki kunye nomvelisi wepulverizer
Ngesanti kubunzulu baphantsi Breaker
Uthotho lweTor Breaker
H Uhlobo loMaphuli
Iingqungquthela zeK KB zoMqhekezi
Uhlobo lweS Breaker
· V Uhlobo Breaker
· H Uhlobo loMaphuli
Ngesanti kubunzulu baphantsi Grapple
Umsiki kunye nePulverizer
Ukucheba ngesanti kubunzulu baphantsi
Ilungele iimeko ezahlukeneyo zokusebenza. Ayinakusetyenziselwa kuphela imisebenzi yokudiliza, njengokuchithwa kwezityalo zamachiza, izixhobo zentsimbi kunye neendibano zocweyo zentsimbi, kodwa kunye nokubuyiselwa kwezinto eziphathekayo. Isixhobo esifanelekileyo sokudiliza. Iimpawu zayo lula kunye nokusebenza eliphezulu. Xa izinto ezilahliweyo zirisayikilishwa kwaye zibolile, kusikwa iziqwenga ezinkulu zize zipakishwe, nto leyo ephucula ukusebenza ngokukuko kunye nokuphepha ukukhathazeka ngabasebenzi. Ifanelekile kwizikhululo zokurisayikilisha inkunkuma enkulu kunye naphakathi kunye nemisebenzi yokudiliza kamasipala.
Yinto isixhobo isiphelo-phambi excavator efakwe kwi Excavator, ngoncedo amandla enikwe excavator, ngokusebenzisa indibaniselwano emihlathini eshukumayo kunye emihlathini esisigxina imisimelelo ityumza ukuphumeza isiphumo zokutyunyuzwa eziphathekayo . Isetyenziswa ngokubanzi kushishino lokudiliza kunye nenkunkuma yemizi-mveliso. ithuba.
Iipleyiti zokutyunyuzwa zenziwe ngumzimba wepliers, isilinda esisixhobo esomeleleyo, umhlathi ohambayo kunye nomhlathi omiselweyo. Umzimba weplisi ubunjwe ngamazinyo emihlathi, iincakuba kunye namazinyo aqhelekileyo. Ifakwe kwi-excavator kwaye yeyokuncamathisela kwe-excavator.
Izitovu zokutyhoboza ngoku zisetyenziswa ngokubanzi kushishino lokudiliza . Ngexesha lenkqubo yokudiliza, ifakwe kwisicoci sokusetyenziswa, ukuze kufuneke umqhubi omnye kuphela.
Izikere ezilahliweyo zifakwe kwizimbiwa kwaye zilungele iimeko ezahlukeneyo zokusebenza. Zingasetyenziselwa imisebenzi yokudiliza, njengokuchithwa kwezityalo zamachiza, izityalo zentsimbi kunye neeworkshops zesakhiwo sentsimbi, kwaye zinokusetyenziselwa ukuphinda zisetyenziswe kwakhona izinto eziphathekayo. Kukuchithwa ngokugqibeleleyo kwezixhobo. Iimpawu zayo ukhuseleko, lula kunye nokusebenza eliphezulu. Izinto ezilahliweyo ziphinda zisetyenziswe kwaye zibole ngelixa amaqhekeza amakhulu esikwa kwaye ehlanganisiwe, nto leyo ephucula kakhulu ukusebenza ngokukuko kwaye kuthintela inkxalabo yezokhuseleko. Ifanelekile kwizikhululo zokurisayikilisha inkunkuma enkulu kunye naphakathi kunye nemisebenzi yokudiliza kamasipala.
Ifowuni: +86 535 6433353
Ifeksi: +86 535 6433353
Iselfowuni: +86 18601660817
Idilesi: No.183 Fenghuangshan Road, Isithili Fushan, Yantai, Shandong, China
Cwaka Uhlobo Breaker, Uchebe Kuba Excavator, Control Valve Breaker, Pulverizer Kuba Excavator, Isityumzi Excavator, Hb Uthotho Breaker,